दमकको जग्गा प्रकरण : के थियो गगन पुरीको वास्तविकता ? (भिडियोसहित) – Lokpati.com
नेकपा प्रधानमन्त्री सरकार प्रचण्ड मृत्यु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड राशिफल नेपाली काँग्रेस अपराध पक्राउ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल प्रहरी अमेरिका केपी शर्मा ओली चितवन
दमकको जग्गा प्रकरण : के थियो गगन पुरीको वास्तविकता ? (भिडियोसहित)
By सुजिता हमाल Last updated Feb 14, 2020
झापा सम्वाददाता। यतिबेला झापाका दमक–८ मा रहेको बालुवाटारको जग्गा प्रकरण चर्चामा छ। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले अनुसन्धन गरेर ११ बिघा जग्गा किर्ते गरेको भन्दै जिल्ला अदालत झापामा नेकपा नेता रेवतराज पुरी (गगन) लाई मुद्दा दायर गरेपछि यो प्रकरण चर्चामा छ।
तर, यो प्रकरणको वास्तविकता अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। प्रहरीले नेकपा नेता पुरीलगायत केही सरकारी कर्मचारीलाई जबर्जस्त दोषी करार गर्न खोजिरहेको छ। प्रहरीले नेकपा प्रदेश १ का सदस्यसमेत रहेका पुरीलाई सरकारी छाप दस्ताखत किर्ते अभियोगमा जिल्ला अदालत झापाबाट मुद्दा चलाएको छ। पुरी अहिले प्रहरीको फरार सूचिमा छन्। तर, पुरीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण फसाउन खोजिएको तथ्य फेला परेको छ।
पुरी नेकपाका दमकमा चल्ताफुर्ता नेता हुन्। पूर्वमाओवादीबाट पूर्वएमालेसँग टक्कर गर्न सक्ने एक मात्र नेता हुन् उनी। अहिले दमकमा कतिपयले गगनको राजनीति सिध्याउन नेकपाकै केही व्यक्तिले उनीमाथि पूर्वाग्रही भएर यो घटना अघि ल्याएको दावी गरिरहेको छ ।
प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको ११ बिघा जग्गा पुरीको नभएको खुलासा भएको छ। हालको दमक–८ स्थित बालुवाटारमा पुरीको ३० बिघा जग्गा पैतृक सम्पत्ति हो। उक्त जग्गाको २०२१ सालमै जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा बनेको थियो। १९९५ सालमा पुरीका बुबा भगवान पुरी धनकुटाबाट दमक झरेका थिए। त्यो समयमा उनले दमक–८ को रतुवापश्चिम र दिपिनी खोला पूर्वमा झाँडी फाँडेर बसेका थिए। त्योबेला भगवान पुरीले करिब ६० बिघा जग्गा डालफाँड गरी जोतभोग गर्दै आएका भगवानका समकालीन लिलम कटुवाल बताउँछन्।
लामो समयको खनजोतपछि २०२१ सालमा तत्कालीन सरकरले भूमिसुधार लागू गरेछि पुरीले पनि उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पाए। ६० विघा जमिन खनजोत गरेको भए पनि हदबन्दीका कारण उनले ३० विगाहको मात्रै धनीपूर्जा पाएका थिए। २०३६ सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर अधिकारीको अगुवाइमा पुरीको धनीपूर्जाबाहेकको जग्गामा ८४ घर सुकुम्बासी ल्याएर राखिएको थियो। तत्कालीन सरकारले २०३९ सालमा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्‍यो। आयोगले ८४ घर सुकुम्बासीलाई बसोबासको आधारमा जग्गा दिन प्रक्रिया पनि थाल्यो। त्यस क्रममा आयोग फिल्डमै गएर उनीहरूको नाममा फिल्डबुक भरायो, जग्गाको कित्ता काट गर्दै नक्सा पनि बनाइदियो।
तर, आयोग काम नसकी विघठन हुँदा सुकुम्बासीले धनीपूर्जा भने पाउन सकेनन्। २०४२ सालमा रतुवा खालामा आएको बाढीले पुरीको ३० विघासँगै ८४ घर सुकुम्बासी बसेको जग्गा पनि बगरमा परिणत भयो। कित्ता काट भइसकेको यो जग्गा बगरमा परिणत भएपछि सुकुम्बासी पनि विस्थापित भए। २४ वर्षसम्म त्यो जग्गामा खोला कुदिरह्यो।
‘दमकमा हाम्रो धेरै जग्गा थियो रे ! तर, खोला पसेर सबै सकियो भन्ने सुनेको थिएँ। म राजनीतिमा पनि गर्ने भएकाले जग्गा खोज्न थालेँ। जग्गामा खोला कुदिरहेको रहेछ’, गगन भन्छन्, ‘राजनीतिक पहुँच पनि भएको, मेरो इच्छाशक्ति पनि भएकाले खोला तठबन्धनको काममा निरन्तर लागेँ। हाम्रोसँगै ८४ घर परिवारको जग्गालाई खोलाबाट सुरक्षित पनि बनाउन सफल भइयो।’
जग्गामै खोला निरन्तर कुदिरहेपछि त्यो बीचमा हरेस खाएर अधिकांश सुकुम्बासीले घरायसी कागज गर्दै विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बेचे। त्यही क्रममा गगनले पनि ती सुकुम्बासीसँग घरायसी कागज गरेर करिब ७ बिघा जग्गा किनेको उनकी श्रीमती सीमाले बताइन्। ‘यसको सबै प्रमाण हामीसँग दराजमा सुरक्षित छ’, उनले भनिन्, ‘समय आएपछि हामी सम्बन्धित निकायमा पेश गर्छौँ।’ त्यहाँ सरकारी जग्गा नभएको गगन बताउँछन्। सरकारी जग्गा भए प्रमाण पेश गर्न उनले चुनौती दिए।
‘यो एरियामा सरकारी जग्गा ५० बिघा त के एक कठ्ठा पनि छैन’, उनी भन्छन्, ‘मेरो बुबाले १९९५ देखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गामा नेपाल सरकारले नै २०३६ सालमा सुकुम्बासी बसायो। २०३९ सालमा नक्सा र फिल्ड बुक बनाउँदै कित्ता नम्बर भरिदियो। त्यही जग्गा मलगायत करिब २५÷३० जना व्यक्तिले किन्यौं र प्रचलित नियमअनुसार नै जग्गा दर्ता गरेका हौँ। कसैले सरकारी जग्गा भनेर समाचार लेख्दैमा सरकारी हुँदैन। सरकारी जग्गा हो भने प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई चुनौती दिन्छु। नेपालभरि अरू नागरिकले आफूले भोगचलन गरर्र्दै आएको जग्गा दर्ता गर्न हुने, तर, हामीले चाहिँ ८० वर्षअघि देखि भोगेको जग्गा दर्ता गर्न नहुने ?’
पुरीले सरकारी जग्गा हडप्न खोजिएको आरोप लगाएको ठाउँको जग्गामा २०३९ सालमै सुकुम्बासी आयोगमार्फत् कित्ताकाट भइसकेको छ भने जग्गाको नक्सा पनि बनेको छ। तर, यसअघि फिल्डबुक भएका अधिकांशले जग्गा घरायसी कागजको भरमा किनबेच गरिसकेका छन्। उक्त स्थानमा घरायसी कागजको भरमा कांग्रेसका दमक नगर सभापति रोशन विष्ट, नेता उमाकान्त आचार्यले पनि जग्गा किनेका छन्।
यस्तै, मनोज घोर्साइ, दीपेन्द्र रिमाल, खगेन्द्र निरौला, नरेन्द्र सिम्खडा, सरू कार्की, चन्द्रबहादुर कार्की, तीलबहादुर बुढाथोकी, मणिराम तामङ, मानबहादुर दर्जी युवराज थापा, नवीन कोइराला, ओम पौडेल, बद्री राईलगायतले फिल्डबुकमा नाम भएकासँग घरायसी कागज गरेर जग्गा किनेका छन्। उक्त ठाउँमा अहिले तीनवटा घर बनिसकेको छ। एउटा फर्म पनि छ भने थप एउटा घर बन्ने क्रममा छ। ‘हामीले कित्ता नम्बर छुटिसकेको जग्गा घरायसी कागज गरी किनेका हौं’, युवराज थापा भन्छन्, ‘यो कसरी सरकारी जग्गा हो ?’
यसअघि पनि फिल्डबुकमा नाम भएका सुकुम्बासीले पुरीकै सहयोगमा धनीपूर्जा पाएका थिए। ‘त्यो बेलाका ८४ घरमध्ये केही सुकुम्बासीले मलाई सहयोग गर्न भन्नुभयो। उहाँहरूको फिल्डबुकमा पनि नाम भएकाले मैले सहयोग गरेँ। केही सुकुम्बासीको जग्गा पनि नियमसंगत ढंगले हाम्रो परिवारको नाममा धनीपूर्जा ल्यायौं। उक्त जग्गा दर्ताका लागि त्यहाँको तत्कालीन तीन ठूला तीन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि कांग्रेसबाट हेमराज सुवेदी, एमालेबाट टेकेन्द्रप्रसाद न्यौपाने र माओवादी केन्द्रबाट केदार सुवेदीले पनि लिखित सहमति गर्दै सिफारिस दिएका थिए। नरपालिकाबाट तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहाल (ताप्लेजुङ दुर्घटनामा निधन भएका) र बालुवाटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष वीरबहादुर चम्लागाईंले पनि जग्गा दर्ताका लागि लिखित सिफारिस दिएका थिए। उक्त प्रमाण अहिले पनि मसँग छ। यदि सरकारी जग्गा भए नगरपलिकाले किन सिफारिस दियो ? पुरी भन्छन्, ‘त्यो बेला हामीले हाम्रो नाममा जग्गा आएपछि ती सुकुम्बासीको नाममा पास गरिदिने सहमति गरेका थियौं। त्यसो गर्दा खर्च कम लाग्छ भन्ने सुकुम्बासीको बुझाइ थियो। त्यही सहमतिअनुसार नै जग्गा फिर्ता पनि गर्‍यौं।’
अहिले विवादित ११ बिघा जग्गा दर्ता गर्न फिल्डबुक भएकासँग किनेका जग्गा धनीहरुले गगनलाई आग्रह गरेका थिए। ‘उहाँ नेता पनि हो। उहाँको पहुँच छ। धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले नै दर्ता गर्न सहयोग गर्नु भनेका हौँ’, उक्त विवादित ठाउँमा जग्गा भएका मनिराम तामाङ भन्छन्, ‘सबैको जग्गा एउटैको नाममा गर्दा खर्च कम हुन्छ भनेर हामीले नै सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ।’
स्थानीय गगनलाई फसाउन केही व्यक्तिले प्रपञ्च रचेको आरोप लगाए। ‘सरकारी जग्गा भए किन कित्ताकाट गरेर फिल्डबुक भरियो ?’, सोही जग्गामा २०३६ सादेखि बसोबास गर्दै आएका खड्गबहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारी जग्गा भनेर भ्रम छर्ने ? अनि सरकारी जग्गा गगनले दर्ता गर्‍यो भनेर माथि बसेर समाचार बनाउने ? यहाँ आएर हामीसँग बुझ्नु, सत्य अर्कै छ। आजसम्म पत्रकार यहाँ आएका छैनन्। त्यसै समाचार बनाएर मुद्दा हालेर गगनलाई बदनाम गर्दैछन्, यो गगनलाई आउने चुनावमा उठ्न नदिने खेल हो।’
त्यहाँ रहेका जग्गा धनीमध्ये ओमप्रकाश पौडेलको नाममा सबै जग्गा दर्ता गर्ने र पूर्वसहमतिअनुसार जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति पनि भयो। पौडेले आफूहरूको सहमति सुनाउँदै पुरीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
पुरी स्थानीय नेता भएका कारण आफ्नो पहुँच पुग्ने ठाउँमा सहयोग गर्न उनले पनि आग्रह गरे। जग्गा दर्ता प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो। तर, अहिले उक्त जग्गामा आफू नै संलग्न भएको भन्दै अफवाह फैलाइएको दुखेसो पुरीको छ।
कसरी लाग्यो मुद्दा ?
पुरीले फिल्डबुक भएको जग्गा साटेर सुकुम्बासी बोसोमाया धिमाल मगरलाई एक कठ्ठा जग्गा दिएका छन्। त्यहाँ बोसोमायाले घर पनि बनाइसकेकी छिन्। आफ्नी सासु विष्णुमाया मगरको नाममा फिल्डबुक भएको उक्त जग्गामा खोलो कुदेपछि उनी भाडामा बस्दै आएकी थिइन्।
तटबन्धनपछि खोलो फर्किपछि उनी पुनः जग्गा खोज्दै बालुवाटार पुगिन्। त्यहाँ उनको तीन कठ्ठा १९ धुर जग्गा खोलाकै छेउमा थियो। एकल महिला बोसोमायालाई त्यहाँ बस्न समस्या हुने भएपछि पुरीलाई आग्रह गरेर एक कठ्ठा नम्बरी जग्गासँग फिल्डबुक भएको उक्त जग्गासँग सट्टापट्टा गरिन्।
२०७२ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पुरी दमक नगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवार थिए। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै थियो। बोसोमायाको जेठाजुका छोरा संजिव मगर हक खोज्दै पुगे। पुरीसँग आफूलाई पनि चाहिने भन्दै जग्गा दिन आग्रह गरे। पुरीले पनि चुनावपछि मिलाउने आश्वासन दिएर सहमतिमा छुटे। ‘मैले त बोसोमायालाई दिइसकेको थिएँ। अरू छन् भन्ने त मलाई के थाहा ?, बोसोमायालाई गाउँ समाजको रोहबरमै दिएको हुँ’, पुरी भन्छन्। ‘तर, मैले दुवै पक्षलाई मेरै घरमा छलफलमा बोलाएँ। त्योबेला म उम्मेदवार भएकाले चुनावको चापमा थिएँ र, निर्वाचनपछि व्यवहार मिलाउने भन्ने सहमतिमा हामी उठ्यौं।’
जग्गा सट्टापट्टामा गगनको कुनै गल्ती नभएको बोसोमाया बताउँछिन्। ‘गगन भाइले त मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभएको हो। म एकल महिला त्यो एकलास्टामा कसरी बस्थेँ त मैले नै हारगुहार गरेपछि हाम्रो तीन कठ्ठा १९ धुर जग्गासँग साटेर उहाँले नम्बरी जग्गा दिनुभयो। घर बनाउन इँट्टा पनि सहयोग गर्नुभयो’, उनी भन्छिन्, ‘मेरो सासुलाई अन्तिम समयसम्म मैले नै पालेको हुँ। सञ्जीव मेरो भतिजो हो। उनीहरूको त तीन तले घर पनि छ। सुकुम्बासी उनीहरु हैन म हुँ। मेरो केही छैन र त म जग्गा खोज्दै आएको हुँ। मैले पाएपछि उनीहरूको पनि आँखा बलेछ।’
तर, सञ्जीवलाई तत्कालीन एमालेका केही नेताले प्रयोग गरे। चुनावमा गगनलाई उम्मेदवार नै हुन नदिन उनीहरु लागिपरे। उनलाई गोविन्द थापा र बलबहादुर थापाले जग्गा उपलब्ध गराउन आफूहरुले साथ दिने भन्दै आड भरोसा दिए। चुनावअघि गगनले सरकारी जग्गा हडपेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन पनि भयो। सञ्जिवलाई गोविन्दले नै अख्तियार पुर्‍याए। अख्तियारले राजनीतिक समस्या भन्दै चासो नदेखाएपछि थापासहितको टोली नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबी पुग्यो।
साविकको दमक १८ र १९ नम्बरमा चाइनिज इन्ड्रस्ट्रियल पार्क भन्दैछ। पुरीले सरकारी जग्गा हडपेर राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनालाई जग्गा नपुगेको भन्दै थापासहितको टोलीले सिआइबीमा बेनामे उजुरी हाल्यो। सिआइबीले अनुसन्धानको क्रममा पुरीलगायतलाई मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरीले पुरीको घरबाट १२१ वटा नक्कली धनीपूर्जा, १८ वटा नागरिकता धनीपूर्जा बनाउने अत्याधुनिक मेसिन तथा पुरीको दुइवटा नगरिकता भेटेको भन्दै गोविन्दले एक अनलाइनमा समाचार लेखाए।
तर, पुरी भने आफ्नो घरमा प्रहरी प्रवेश नगरेको दावी गर्छन्। ‘मेरो घरमा प्रहरी आएको छैन। नभएको प्रचार गरियो’, उनी भन्छन्, ‘म राजनीति गर्ने मान्छे हुँ। दुईवटा नागरिकता भएको भेटिए म राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु।’
पुरीले छानविनका लागि पार्टी प्रदेश कमिटीमा समेत निवेदन दिएका छन्।
‘पार्टीभित्रैबाट केही व्यक्तिले योजनवद्ध ढंगबाट मेराविरुद्ध कानुनी संकट पैदा गराएर राजनीतिक फाइदा लिने दाउमा रहेको र मिडियामा कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण गरी भ्रम पैदा गरेको, आफूलाई अन्याय गरेका छन्’, उनले भने, ‘हुँदै नभएको कुरालाई अतिरञ्जित ढंगबाट प्रचार गरेर पार्टी र आम जनसमुदायमा मेराबारेमा ठूलो भ्रम पैदा गरेको हुँदा अविलम्ब अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बुझ्न पार्टीमा निवेदन दिएको छु।’
नेकपा प्रदेश १ कमिटीले पनि तीन सदस्य समिति बनाएर छानविन सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ।
दुर्गा प्रसाईंको निवेदन किन दर्ता गरे गिरीले ?